Manatsara ny vokadratsin'ny COVID-19 amin'ny fizahantany ankehitriny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Manatsara ny vokadratsin'ny COVID-19 amin'ny fizahantany ankehitriny
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Edmund Bartlett
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nanao famelabelaran-kevitra tamin'ny Kongresin'ny Minisiteran'ny Minisiteran'ny Amerika sy ny manampahefana ambaratonga ambony an'ny fizahantany androany faha-6 Oktobra 2021. Ity fampisehoana ity dia natao ho ampahany tamin'ny Sesien'efitra 3: Paikady hanalefahana ny voka-dratsy ateraky ny COVID-19 momba ny fizahan-tany: famporisihana sy fanampiana ho an'ireo orinasa mifandraika amin'ny fizahantany.
Nampahafantatra ny paikady sy ny ezaka ataon'ny governemanta i Jamaika mba hanalefahana ny fiatraikany ratsy amin'ny valanaretina amin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Ny governemanta Jamaikana koa dia nanao laharam-pahamehana ny fanampiana ireo orinasa bitika, kely sy salantsalany.
Ny fidiran'ny minisitra amin'ity fotoana ity dia mifantoka amin'ny maha-zava-dehibe ny vaksininy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena manerantany sy ny fizahantany.
Atolotra eto ny fanamarihana nataon'ny minisitra Bartlett:
Misaotra, Ramatoa Seza.
Ny delegasion'i Jamaika, tamin'ny fivorian'ny OAS sy CITUR teo aloha, dia nampahafantatra ny paikadin'ny governemanta sy ny ezaka ataony mba hanalefahana ny voka-dratsy ateraky ny areti-mandringana amin'ny ny sehatry ny fizahan-tany. Izany dia tamin'ny alàlan'ny fepetra fanavaozana fohy sy maharitra toa ny lalantsara mahazaka fizahan-tany mba hitohizan'ny asan'ny fizahan-tany ho an'ny sehatra ary koa kitapom-batana $ 25 miliara ho an'ny toekarena misimisy kokoa, miaraka amin'ny fanomezana Grant Grant ho fanampiana ireo orinasa miasa ao amin'ity sehatra ity voan'ny COVID-19. Ny governemanta Jamaikana koa dia nanao laharam-pahamehana ny fanampiana ireo orinasa bitika, bitika sy salantsalany, ary nanamarika fa ireo orinasa ireo no ivon'ny toekarena Jamaikana.
Ny fidirako an-tsehatra amin'ity fotoana ity dia hifantoka amin'ny singa iray hafa manan-danja indrindra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena manerantany sy ny fizahantany—vaksiny. Nasongadinay ny antso, tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity, avy amin'ny Lehiben'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (IMF), Banky Iraisam-pirenena (WB), World Health Organization (WHO) ary World Trade Organisation (WTO) momba famatsiam-bola mitentina US $ 50 tapitrisa fizarana izay mety hiteraka dolara 9 tapitrisa dolara amerikana amin'ny 2025. Mino tanteraka ny solontenako fa "tsy hisy ny fanarenana amin'ny ankapobeny raha tsy mitsahatra ny krizy ara-pahasalamana. Ny fahazoana manao vaksiny dia fanalahidy roa. ”
Mampalahelo fa amin'ity dingana ity amin'ny areti-mandringana, dia mitohy ny tsy fitoviana vaksinina, na dia mihoatra ny 6 miliara aza ny vaksinina voaparitaka, ny ankamaroan'izy ireo dia any amin'ny firenena manana fidiram-bola be nefa ny firenena mahantra dia ambany noho ny 1% ny mponina vita vaksiny. Manaiky izahay fa ny fanaovana vaksiny manerantany dia tsy vitan'ny filàna ara-pitondrantena fotsiny fa koa manome fahatsapana ara-toekarena maharitra. Raha jerena ny toetran'ny areti-mandringana, sy ny COVID-19, indrindra, tsy misy fizahan-tany maharitra maharitra na maharitra izay avela any ambanin'ny firenena ambany fidiram-bola. Ity no lohahevitry ny Agenda 2030 ho an'ny fampandrosoana maharitra - fandrao hadinontsika. Amin'izay lafiny izay, mandray sy mankasitraka ny fanomezana vaksinin'ireo mpiara-miasa efa niombon'antoka izahay ary hamafisinay fa fanomezana tokony ho tonga amin'ny fotoana ilana azy sy mahomby ireo, miaraka amin'ny fiheverana ireo datin'ny vaksinina.
Raha ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany eran-tany (UNWTO) tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, ny famoahana vaksiny eran'izao tontolo izao dia antony iray isan'ny mariky ny fihemorana nankafizin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena tamin'ny volana Jona sy Jolay 2021. Ny fanontana farany nataon'ny UNWTO World Tourism Barometer dia mampiseho fa tombanana ho 54 mpizahatany an-tapitrisany no niampita ny sisintany iraisampirenena tamin'ny Jolay 2021, nidina 67% tamin'ny Jolay 2019, nefa mbola ny vokatra matanjaka indrindra hatramin'ny aprily 2020.
Ny delegasionako dia faly nanamarika fa ny faritra misy anay any Amerika dia nahita fihenana kely kokoa noho ny isan'ny mpizahatany iraisam-pirenena 68% noho ny faritra hafa, miaraka amin'ny Karaiba mampiseho ny fahombiazana tsara indrindra eo amin'ireo zana-tany manerantany. Vaovao mampahery izany hanazava ny lalantsika mankany amin'ny fanarenana hatrany. Araka ny nolazain'ny Tale Jeneraly Ikonyo-Iweala avy amin'ny World Trade Organisation, "ny fanarenana ara-toekarena sy ara-barotra maharitra dia tsy maintsy tratra miaraka amin'ny politika izay manome antoka faingana ny fahazoana vaksiny manerantany."
Ny WHO dia nanasongadina ireo zava-dehibe nitranga tamin'ny fanatanterahana vaksiny 40% manerantany tamin'ny Desambra 2021 ary 70% tamin'ny Jona 2022 mba hampitsaharana ny areti-mandringana. Manana ny fitaovana ilaina isika, ary ny masontsika dia tsy maintsy mifantoka amin'ny valisoa mba ho tafavoaka velona sy hahomby amin'ity taranaka ity sy ny ho avy.
Rehefa miatrika ny fanaparitahana vaksinina tsy mitovy amin'ny firenena mandroso sy firenena ambany fidiram-bola amin'ny Global South isika, dia miatrika fanamby fanampiny amin'ny fisalasalana amin'ny vaksinim-pirenena sasany. Matetika ny olona matahotra ny rano tsy misy saripika, indrindra ny amin'ny fahasalamany, ary ny fampahalalana diso dia manome io tahotra io.
Any Jamaika, miaraka amin'ny mponina efa ho 3 tapitrisa, dia nanatitra fatra 787,602 izahay, ary ny 9.5% -n'ny mponina voarakitra ihany koa fa vita vaksiny tanteraka. Ny governemanta dia nampiasa hafatra mamorona mba hampahafantarana ny olom-pirenena ary hampirisihana ny fanaovana vaksiny. Nohamafisina ny fiaraha-miasa amin'ny daholobe sy ny tsy miankina miaraka amin'ny fifanarahana nifanaovana tamina orinasa hanampiana ireo mpamily vaksiny any amin'ireo faritra an-tsokosoko toy ny fivarotana lehibe sy toeram-pivarotana hanamorana ny fahazoana vaksiny. Izahay dia mahatadidy ireo marefo kokoa eto amintsika ary amin'ity lafiny ity, ny serivisy fanaovana vaksiny finday dia nampiharina mba hahatratrarana ireo faritra ambanivohitra sy amin'ireo tokantrano mahantra, ireo be antitra sy ireo olona manana fahasembanana izay mety tsy afaka mivezivezy mora foana amin'ny fanaovana vaksiny.
Manokana eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia noforonina ho toy ny fampisehoana fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny daholobe (minisiteran'ny fizahantany) sy ny sehatra tsy miankina (Initiative Vaccine secteur privées sy ny jamaica Hotel and Association turista) ny Taskforce fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany mba hanamorana ny COVID-19 an-tsitrapo vaksinin'ny mpiasa fizahan-tany 170,000. Lasibatra fatratra io; na izany aza, mijanona ho tsy matahotra isika satria tao anatin'ny telo andro voalohany tamin'ny fandaharana, mpiasa 2000 mahery no vita vaksiny.
Ny delegasionako dia mahatadidy ny anjara asan'ny "politika pandemika" izay mety hanakantsakana ny ezaka ataontsika amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Mikasika izany, ny fandrindrana sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena no lakile hiantohana ny faneken'ny eran'izao tontolo izao ny vaksiny azo antoka sy mahomby mba tsy hanavakavahana diso tafahoatra ny fidiran'ny olona sy ny fivezivezena. Te-hamerina ny hevitra momba ny fanavakavahana aho. Ny areti-mandringana dia nanasongadina sy nampitombo ny tsy fitoviana misy eo amin'ny firenena sy amin'ny firenena. Ny politikantsika sy ny programa dia tokony hiompana amin'ny fiarovana ny ainy sy ny fivelomany ho an'ny kalitaon'ny fiainana sy ny fampandrosoana maharitra.
Ny fizahantany amin'ny maha varotra amin'ny serivisy azy dia tena zava-dehibe amin'ny firenena any Karaiba sy Amerika noho ny fandraisany anjara amin'ny asa, ny harin-karena faobe ary ny fifanakalozana fifanakalozana ivelany. Amin'ny maha-sehatra mazoto miasa ny olona antsika, ny tombom-barotra sy ny fatiantoka ataontsika dia hita taratra amin'ny tsiky sy sento ataon'ny mpiasa sy ny mpizahatany eto amintsika. Raha ataontsika loha laharana ny olona dia afaka mahita lalana isika, saingy amin'ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetra ihany.
Ny Governemanta ao Jamaika dia manamafy ny fahavononany amin'ny fitsipiky ny multilateralisme ao amin'ny Organisation of American States (OAS) sy any amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena hafa. Tsy hahazo ny politikan'ny vaksinina mihitsy izahay raha tsy misy fiaraha-miasa. Tsy hahita fanarenana mahomby mihitsy isika raha tsy misy fiaraha-miasa. Miantso ny firenena rehetra solontena androany aho mba handinika ny zava-misy sy ny fomba tsara indrindra hiaraha-miasa mba hisongadinan'ny hery sy hatanjaka kokoa.